Isugeynta EMBA. s Paseky nad Jizerou | Buuraha Weyn, Jizera Mountains, Jannada Bohemian
HomeblogGiant MountainsMountainsvideoEMBA spol. s Garacad Paseky nad Jizerou
12.1.2018 by PetrPikora.com
EMBA spol. s Garacad waa shirkad Czech ah oo ku taal xuduudaha u dhaxeeya Buuraha Giant iyo buuraha Jizera. Bilowga taariikhda kartoonada Jizerou nad Paseky in sanadka 1882, marka waxaa jiray Rösslerovými walaalo aasaasay warshad wax soo saarka handmade bokisyada cad ee warshadaha galaas ee gobolka Jablonec ah. Waayo-yada oo dhan soo socda ee nolosha lagu gartaa ballaarinta barnaamijka iyo wax soo saarka wax soo saarka boos ee shirkadda.
Dhacdooyinka muhiimka ah ee taariikhda dukaamada bakeeriga ah ayaa badanaa lagu rakibay mishiinnada kartoonada automatic ah ee sanadaha 1970 iyo 1989, taas oo keentay koror weyn oo wax-soo-saarka waxsoosaarka. Dhamaadka sagaashamaad ee qarnigii labaatanaad, oo hoos imanaya magaca EMBA, horumarinta qoraallada aruurinta ee dhamaystirka diiwaangelinta ganacsiga iyo dukumentiyada muhiimadda dhaqameed iyo taariikhiga ah ayaa bilaabmay. Milyan sannadkii cusub, waxqabadka waxsoosaarka waxaa lagu daray fiilooyin loogu talagalay wax soo saarka kaydinta xawilaadda xafiiska.
EMBA waa shirkad Czech ah oo caado dheer leh iyo dabeecad mas'uulka ka ah bulshada iyo deegaanka. Waxyaabaha dabiiciga ah waxaa soo saarey warshad waraaq ah oo gabi ahaanba dib loo rogi karo. Iyada oo loo marayo badeecadeeda EMBA, waxa kale oo ay gacan ka geysataa badbaadinta iyo ilaalinta hiddaha dhaqameed iyo taariikheed ee dalal badan. Maadaama uu yahay shaqaale weyn oo gobolka ah, wuxuu mas'uul ka yahay horumarinta xaalado shaqo oo xasilan oo ammaan ah shaqaalihiisii, iyo sidoo kale balanqaad ku aaddan in ay gacan ka geysanayso xasilloonida bulshada ee gobolka guud ahaan.
Paseky nad Jizerou waa tuulo buuro ah oo kuyaal degmada Semily, gobolka Liberec, oo ku yaal Buuraha Giriigga ah, oo ku taal xuduudaha Jizera Mountains, dhinaca midig ee Jizera Mine. 252 degganayaasha waxay halkan ku nool yihiin; tiro kiro ah iyo dhismooyin kale waxay maanta u adeegaan fasax. Qaybta waqooyi ee degmada waxaa iska leh Beerta Qaranka ee Krkonoše, qaybta koonfureed oo ay ku jiraan degsiimooyinka muhiimka ah ee ku yaala Jardiinada Jardiinooyinka Xayawaanka Dabiiciga ah.
Tilmaamaha ugu horreeya ee tuulada ayaa ka yimid 1713.
Tuulada waxaa laga yaabaa inay ku saleysantahay 16. Si kastaba ha ahaatee, diiwaanka ugu horeeya wuxuu ka yimid 1654. Qeybta ugu da'da weyn waxay ahayd Makov, halkaas oo muraayadihii hore ee wakhtigaas ahaa, iyo Xawrna, halkaasoo lacag laga helay. Waqtiga ay u socotay, kaymaha waxay ka baxeen dhaqdhaqaaqa bani'aadamka, ceelal cusubna waxay u muuqdeen xayndaab cusub, dadka degganaa, dhab ahaantii, gacmahooda. Dhagaxyada ka soo jeeda goobaha caadiga ah ee qoryaha ah waxay ku urursan yihiin tuulooyinka inta badan ku baxa.
In 1789 kiniisadda la dhisay sanadkii a 1791 ahaa Pasekách bilaabay waxbarasho oo joogto ah. The dugsiga degaanka baray revivalists qaranka, pappi Josef Simunek iyo caawiyihiisa Věnceslav Metelka noqday fikrada qani ku ah music, tiyaatarka, nolosha dhaqanka suugaanta iyo guud ahaan tuulada. Věnceslav Metelka sida autodidact ah u tababaran gaare violin iyo aasaasay xeerkii violin-samaynta ay isirka, kaas oo soo baxay ee loo yaqaan dugsiga violin Giant, weli ku noolnahay adduun in genera Pilar Špidlen iyo Vedral. Ka dib dagaalkii labaad ee dunida ugu dhaceen dhaqan muusikada macalinka waqti Pasecký violin František Vedral, laakiin konton konton goor dambe band iyo tiyaatar oo aan rasmi waayay. Sanadkii 1970-kii 20. qarnigii iyo shaqeeyay tuulada St. Vaclav Pater MUDr. Ladislav Kubíček. In 1980 waxaa la aasaasay by Church of heesta St Wenceslas qasiidooyinka Society, oo hadda uu leeyahay in ka badan xubnaha 30 tan 1990 Paseky sannad walba u qabanqaabisaa xaflado music, orchestra Choir sameeyo fannaaniin inta badan xirfadeed.
Tuuladu waa muuqaal ka mid ah sheeko run ah Karel Vaclav Raise Zapadlí vlastenci. Qorshihiisa wuxuu ku yaal 40. duulimaad 19. qarnigii 21aad, iyo Paseky waxaa loo bedelay Pozdětin, Rais wuxuu soo jiitaa xusuusta uu ku leeyahay xusuusta Metel, shaqo fiican oo muusig ah.
Barwaaqada ugu weyn waxay ahayd Paseky ee 1869, markii 212 lagu diiwaangeliyey halkan oo leh tirooyin qeexan iyo 1710 deggan. Kadibna dejinta si tartiib ah ayuu u soo kabtay. Inkastoo xaqiiqda ah in degsiimooyinka Pasek ay ku badan yihiin Czech, Heshiiskii Munich wuxuu ku xirnaa Jarmalka oo qayb ka ah Sudetenland. Xitaa markii dadkii degganaa Pasek aysan si toos ah ula xiriirin Jarmalka ka dib, waxay hoos u dhacday tirada dadka joogtada ah, inta badanna ceymiska waxaa soo iibsaday fasax sameeyayaasha. Meedows in daryeelka xayawaanka gobolka ayaa qeyb ahaan burburay makaanikada culus, qayb ahaanna la dayacay. 1979, dugsiga ayaa la joojiyay Paseky.
Xarunta degmada: makhaayadda bidix iyo hawlgabka Na Buďárce, xafiiska boostada iyo xafiiska degmada. Midigta waa Memorial ee Zapadly Patriots ee kaniisaddii hore, oo ka dambeeyey Church St. Wenceslas.
Sokol Mucjisada Midnimada waxaa lagu aasaasay Paseky sanadka 1896. Sanadihii 1936-1938, waxaa la dhisay Sokol Hall iyada oo gacan ka helaysa boqokan yar oo ah Sokol, oo noqotay xarun dhaqameed ka dib Dagaalkii Labaad ee Aduunka. Tiyaatada dabiiciga ah waxaa lagu dhisay kaynta oo ku taal Sokol House. dulucdii hawlaha ahaa nuqulka kowaad iyo kan ugu dambeeya ee bandhiga music iyo tiyaatarka todobaadle ah ee Paseckého 1952, ka dib markii ay hawlo taliskii communist Sokol joojiyey oo waxaa jiray hoos u dhac guud ee nolosha bulshada. Sokol House wuxuu gubay sanadka 1967, markii loo shaqaaleysiiyay ciidamada Czechoslovak. Currently (2008) waa maxaliga ah TJ Sokol badan xubnaha 100 iyo heshiisyo la isboortiga, muusikada iyo dalxiiska hawlaha, xerooyinka xagaaga ee carruurta abaabulan, ka qayb nadiifinta tuulada iyo wixii la mid ah.
Tan iyo markii 1888 ee Paseky, waxaa sidoo kale jiray koox dab-demis ah oo tabaruc ah. Markii hore, dab-bakhtiiyeyaasha maxalliga ahi waxay abaabuleen kubbado waxayna ku ciyaarayeen masraxiyadda hiwaayadda ee U Soukupu pub, ka dib markii guriga la dhigo. 1931, guutada dab-demiska waxay ka sameysay koox fanaaniin ah oo ka soo jeeda Havirna.
Intaa waxaa dheer, laga bilaabo sanadka 2010, ururka bulshada ee Paseky outdoor os wuxuu ka shaqeynayaa tuulada, kaas oo qabanqaabiya dhacdooyinka isboortiska iyo dhacdooyinka dhaqameed.
Laga soo bilaabo 1976 ilaa 1990, Paseka ma ahayn degmo gooni ah laakiin qayb ka mid ah Rokytnice. In Paseky 1991 loo yaqaan gudahood Barnaamijka Renewal Miyiga iyo qaabka guud ee barnaamijkan ayaa la sameeyey oo ansixiyay Plan Xuduudda oo ka mid ah Paseky nad Jizerou.
Tuulada waxaa ku yaal warshad alwaax ah FUKNER sro, oo soo saaraha baakadaha iyo baakadaha kartoonka ah EMBA sro iyo beerta xayawaanka Zvonice.
Taariikhda maxaliga ah waxaa loogu talagalay Matxafka Zapadly ee waddaniyiin ah dhismaha kaniisad kaniisadeed oo hore, oo ka xigta Kaniisadda St. Wenceslas iyo ka soo horjeeda makhaayadda Na Bu'árce. Matxafku wuxuu u heellan yahay shaqada loo yaqaan 'violinist' iyo qoraaga Věnceslav Metelka iyo sidoo kale qoraaga Karl Vaclav Rais, nolosha buuraha deegaanka ee 19. qarnigii, jilicsanaanta iyo aruurinta. Xusuusta waxaa lagu dhisay 1958 qolalka dabaqa hoose ee kaniisadda, sanadka 1975 ayaa dib loo dhisay iyadoo loo eegayo sawirka PhDr. Jaromir Jech, oo ah khabiir iyo daabacaad ka mid ah shaqada Metel. 1978 waxaa loo kordhiyay dabaqa sare. Matxafka ayaa hadda ku hoos jira maamulka maamulka ee Krkonoše National Park.
Tuuladu waxay ka kooban tahay dhawr degsiimood oo tiro badan oo ah xayawaanno xayawaan ah ayaa ku faafay meeraha. Degmada oo dhan waxaa ka mid ah hal darajo oo cadawtin ah. Qeybaha dejinta aasaasiga ah waxaa si isdaba-joog ah uga diiwaangashan degmada saddexda: Paseky nad Jizerou, Havírna iyo Makov. Havírna dejinta strip oo ku tiil dooxadii ku Havírenského qulquli koonfurta top Hromovka woqooyi top Mechovice (m 803), wuxuuna ka kooban yahay goobaha la deggan yahay sida buuraha, Piave, Lomička, qallajin iwm Makov dejinta ee qaybta koonfureed ee degmada oo ku taal dooxadii Makovského potoka. qayb-galbeed ee magaalada, iyadoo dhowr wiishashka ski iyo dhaadhacyadii, loo yaqaan Hořensko, koox ka mid ah guryaha ku taallay dhinaca bari ee buurta Javorníka ah (m 822) waxaa lagu magacaabaa Tomšová. Wadada u dhow Tomšov waxaa ku yaalo barxadii hore ee Na Perlíčku ama Na Pldek. Tuulada waxaa ka mid ah meel kaymaha (inta kaymaha gran) waqooyiga ee macdanta, iyadoo hills Hromovka (916 m) White Rock (meel u dhow m ka 957 sare, goobta tuulada siinayaa 964 m) iyo Kapradník (910 m) iyo dejinta Waxaa lagu qaaday Dooxada Jizera. Barta ugu hooseysa ee tuulada waa Jizera, 476 m
Tuulada ayaa ku dhow galbeed la degmooyinka Zlata Olesnice iyo xidid (k. dir. Rejdice, dedaan iyo Polubný) deegaanka waqooyi-galbeed ee magaalada Jizerou Harrachov, in bari la soohdinta reer Jizerou Rokytnice (Dolní Rokytnice), oo ku yaalla koonfurta magaalada la yiraahdo Vysoké nad Jizerou (oo ku dhow Sklenařice) iyo magaalada Jablonec nad Jizerou.
Tags: 4K, archiving, archivbox, dji mavic, drone, drone, EMBA, EMBA spol. s Garacad, kartoonada siman, Jizerky, Giant Mountains, Mountains, kvadroptéra, Tariin, kartoonada, Lysa Hora, skiing, mavic, gawaarida, meesha baabuurta la dhigto, nadiifsan, Paseky nad Jizerou, phantom, phantom 3, phantom 4, Poland, gal, Rokytnice, ski miciinka, skipas, hoyga, Vilemov, shootali, wax soo saarka ee baakado, ka sarraysayna
Post hore Paseky nad Jizerou, Vilemov, Rokytnice nad Jizerou
Next article Vitkovice in Mountains Giant ah
Krkonoše dhamaadka wiigga, qalabka kuleylka 310.0134
Roudnice ee Krkonoše guga 2018
ka tag jawaab Cancel reply
Fariin cusub oo faallooyin ah email ahaan.
Ogeysii qoraalada cusub email ahaan.